Teddy (2021) | MM Movie Store
ရှီဗာဆိုတဲ့ လူဟာ ဉာဏျအရမျးကောငျးတဲ့ လူတဈယောကျပါ။သူ့ရဲ့ ဉာဏျရညျနဲ့ လူအတျောအမြားကို ကူညီပေးပွီးစာပတေျောတျောမြားမြား နှံ့စပျသူ တဈယောကျပါ။တနမှေ့ာတော့ သူ ရထားပျေါမှာ မိနျးကလေးတဈယောကျကိုလူဆိုးတဈစုက ရမျးကားရာကနေ ကယျတငျကူညီပေးရငျးသူ့မှာ ထူးဆနျးတဲ့ ဝကျဝံရုပျလေးတဈရုပျ ရခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီဝကျဝံရုပျလေးဟာ စကားပွောလမျးလြှောကျတတျပွီးသူ့ဆီကို အကူအညီတောငျးခံခဲ့ပါတယျ။ဝကျဝံရုပျလေးမှာ ရငျနငျ့ဖှယျရာ ဇာတျလမျးလေးတဈခုရှိပွီးတဈဆကျတညျး အန်တရယျမြားလှနျးတဲ့ပွဿနာကွီးတဈခုလညျးရှိနတောကို သိလိုကျရခြိနျမှာတော့….
သူတို့ ၂ယောကျအတူ ဘယျလို ဖွရှေငျးရမလဲ၊ဝကျဝံရုပျလေးရဲ့ ပွဿနာက ဘာလဲ…..ဇာတျလမျးလေးက သဘာဝလှနျဖွဈရပျကိုအခွခေံထားပမေဲ့ ပေါမနဘေဲတျောတျောကွညျ့လို့ကောငျးတဲ့ အိန်ဒိယ ကားတဈကားဖွဈပါတယျ…
ရှီဗာဆိုတဲ့ လူဟာ ဉာဏ်အရမ်းကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့ ဉာဏ်ရည်နဲ့ လူအတော်အများကို ကူညီပေးပြီးစာပေတော်တော်များများ နှံ့စပ်သူ တစ်ယောက်ပါ။တနေ့မှာတော့ သူ ရထားပေါ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလူဆိုးတစ်စုက ရမ်းကားရာကနေ ကယ်တင်ကူညီပေးရင်းသူ့မှာ ထူးဆန်းတဲ့ ဝက်ဝံရုပ်လေးတစ်ရုပ် ရခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီဝက်ဝံရုပ်လေးဟာ စကားပြောလမ်းလျှောက်တတ်ပြီးသူ့ဆီကို အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဝံရုပ်လေးမှာ ရင်နင့်ဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုရှိပြီးတစ်ဆက်တည်း အန္တရယ်များလွန်းတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုလည်းရှိနေတာကို သိလိုက်ရချိန်မှာတော့….
သူတို့ ၂ယောက်အတူ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ၊ဝက်ဝံရုပ်လေးရဲ့ ပြဿနာက ဘာလဲ…..ဇာတ်လမ်းလေးက သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ကိုအခြေခံထားပေမဲ့ ပေါမနေဘဲတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ အိန္ဒိယ ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်…
9-1-1 (Season 3) ၊ အပိုငျး (၂)